Homeअन्तरवार्ता‘नेपालीको ससुराली हो इन पोर्चुगल, हि म्मत न भए सडकमा पनि सु त्नुपर्छ’ : गौरव न्यौपाने
काठमाडाैं । भक्तपुरका रैथाने गौरव न्यौपाने विगत १० वर्षदेखि पोर्चुगल बस्दै आइरहेका छन् । आफू राप्रपा नेपालको समर्थक भएपनि कमल थापाको राजनीति गर्ने तरिका सही नभएको उनको दाबी छ । कमल थापाको मात्र हैन नेपालका सबै पार्टीका नेताको राजनीति गर्ने तरिका सही नभएको उनी बताउँछन् । युवाहरू विदेश पलायन हुनुमा देशको राजनीति स्थिर नहुनु र रोजगारीको भरपर्दो व्यवस्था नहुनु मुख्य कारण रहेको उनको तर्क छ ।
आफू एक व्यक्तिले धेरै थोक गर्न नसकेपनि पोर्चुगलमा रहेका हरेक नेपालीको दु:ख–सुखमा साथ दिँदै आएका गौरव हाससालै पोर्चुगलको सडकमा नेपालीहरू सुतिरहेको खबर सार्वजानिक भएपछि चिन्तित बने । यही चिन्ताको विषयमा गौरव न्यौपाने समक्ष लोकान्तरका लागि स्तम्भकार दिलनिशानी मगरले केही प्रश्नहरू सोधेका छन्:
पोर्चुगलमा नेपालीहरू सकडकमा सुतिरहेका छन् भन्ने सुनियो- यस्तो सुन्दा तपाईंलाई दु:ख लागेन?
पोर्चुगलमा हजारौं नेपाली छन्, तीमध्ये कुनचाहिँ नेपाली त्यसरी सडकमा सुतिरहेको हो त्यो मैले पनि पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन । यो जाडोमा होमलेस नै भएर सडकमा सुत्नुपरेको हो कि दारुपानी चढाएर सुतेको हो त्यो यकिन हुन सकेको छैन । तर मेरो विचारमा होमलेस, जबलेस भएर कोही नेपाली यसरी सडकमा सुत्नुपरेको छैन जस्तो लाग्छ ।
भनेपछि कोही पनि नेपाली पोर्चुगलको सडकमा सुत्नुपरेको छैन ?
हो बरु काममा दु:ख होला, भाषा ईत्यादिका कारण । तलब पनि सोचे अनुरूप छैन । सिजन र अफसिजनमा काम पाउने/नपाउने कुरा हो । नेपालमा धेरै खर्च गरेक आउने तर यहाँ आएपछि सोचे अनुरूप पैसा कमाई नहुने पक्का हो । तर केही वर्षमै रेसिडिन्सी मिल्ने भएका कारण फाइदा पनि त छन् ।
पोर्चुगलना मुलत: कागजका लागि नेपालीहरू आउँछन् । धेरै मानिस यसरी आउँदा काम नपाइने र पाइएपनि श्रमको मूल्य कम हुने त पक्का हो । जे होस्, सडकमै सुत्ने स्थिति त मैले देखेको छैन ।
मुख्य समस्या के हो त उसो भए ?
मुख्य कुरा संघर्ष गर्न डराउन हुँदैन । एकैपटक ग्वाम्म खोजेर पनि हुँदैन । हेर्नुहोस्, म राजनीति जान्दिनँ । कुरा भनेको डाइरेक्ट गर्छु घुमाइफिराइ पनि जान्दिनँ । अब म यहाँ बसेको दश वर्ष भैसक्यो । शुरूका दिनमा मैले पनि धेरै संघर्ष गरे । दु:ख गरे । फरक भाषा, फरक हावापानी, फरक भूगोल र फरक–फरक मानिसहरूसँगको सम्पर्क-सम्बन्ध गर्नुपर्छ यसकारण विदेश सजिलो कुरा हैन । कम्तिमा म कहाँ छु भन्नेबारे बेसिक नलेज त राख्नुपर्‍यो नि यार !
पोर्चुगलको सडकमा नेपालीले रात बिताउनुपर्ने अवस्था नै छैन त ?
कुलतमा फसेका, नशाले थिचिसकेका केही नेपालीहरू कहिलेकाहीँ पैसा माग्दै हिँडेको मैले पनि देखेको थिएँ । हमीले उनीहरूलाई पैसा उठाएर टिकट काटेर घर पठाउन खोज्छौं तर अन्तिममा आएर उनीहरू भागिहाल्छन् ।
अब कसको दोष यो ? विदेशमा काम नगरे खान त कहाँ पाक्षइन्छ र ? यसकारण मलाई के लाग्छ भने आर्थिक मन्दीका कारण कामै नपाएर कुनै घरेलु युद्ध तथा संकटका कारण खानै नपाएर कोही नेपाली सडकमा सुतेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । रक्सीको तालमा त नेपालमा पनि सडकमा मानिसहरू सुतिरहेकै हुन्छन् । अमेरिका, युरोप जहातहीँ सुतिरहेका हुन्छन् ।
अब यदि पोर्चुगलको अवस्था दयनीय नै छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने यहाँ नआए भैहाल्यो नि ! जताजता सजिलो छ, त्यतै गए भयो ।
पोर्चुगलमा नेपालीहरूलाई कुनै समस्या छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
एउटा कुरा त तपाईंलाई के भन्छु भने पोर्चुगल नेपालीहरूको ससुराली हैन । हिम्मत र आँट नभए यहाँ गाह्रो छ । यहाँ मात्र हैन संसारभरि गारो छ । तर तपाईंलाई एउटा कुरा भनुँ, आप्रवासीहरूको लागी संसारमा सबैभन्दा सजिलो । फराकिलो नियम भएको देश पोर्चुगल नै हो ।
संसारमा यस्तो देश अरू कहाँ छ? यहाँ युरोपका घेरै देशहरूमा बरालिएर कागज बनाउन नसकेका अन्तिममा कागज बनाउन आउने गरेका छन् । कागजको प्रकिया पनि एकदमै सहज छ । यो सकरात्मक पाटो पनि त हेर्नुपर्‍यो नि ! खाली नेगेटिभ मात्र सोचेर त भएन । हो कतिपय अवस्थामा ठगीका प्रकरणहरू धेरै सुनिन्छन् ।
व्यवसायीबाट ठगी भएको भन्ने पनि सुनिन्छ नि !
कतिपय ठगी गर्ने व्यवसायीहरूलाई यो देशले कारबाही पनि गरेको छ, डिपोर्ट गरेको छ । नियम कानून भएको देश हो यो । कोही ठगिएमा ठग्नेमाथि कारबाही हुन्छ । पोर्चुगलमा समस्या नै छैन म भन्दिनँ तर एकदमै भयाभह डरलाग्दो छ भन्नेचाहिँ हैन । कुनचाहिँ ठग काममा नगएर रक्सी खाएर सडकमा सुत्यो अनि त्यसैको आधारमा सम्पूर्ण पोर्चुगलको बदनाम गर्न त मिलेन नि ! व्यापरी पनि पैसा कमाउन आउने हुन् ।
कोही कसैबाट कमजोरी भएको होला तर आमरूपमा त्यसो हैन ।
पोर्चुगलमा नेपाली दालालहरूबाट नेपाली नै ठगिन्छन् रे त ?
हो यो चै सत्य कुरा हो । दालाल नै त नभनौं केही व्यवसायीहरूको लोभीपापी मनका कारण नेपालबाट आउने युवाहरूलाई मर्का भने परेको देखिन्छ । स-सानो काम गरिदिएबापत पनि सय युरो, दुई सय युरो लिने गरेको सुनिन्छ तर सामान्य सेवा शुल्क त लिनैपर्‍यो । समयको खर्च हुन्छ, यहाँ कोही स्यवंसेवक त छैन ।
कामको कन्ट्याकमा पनि कमजोरी हुने गरेको देखिन्छ । मलाई लाग्छ यस्ता कमजोरीहरू प्राविधिक हुन् । सुनुयोजित हो भन्ने लाग्दैन । यही हो भने नियमअनुसार कारवाही हुनुपर्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने युरोप आउन सक्ने मान्छेलाई कम्तिमा यहाँको बारेमा बेसिक नलेज त हुनुपर्‍यो नि ! भाषा जानेको हुँदैन, केही सिकेको हुँदैन । मुद्दा लड्यो उल्टै नोक्सान हुन्छ । यसरी पनि नयाँ मानिसहरू पीडित बनेका छन् ।
तपाईंले अहिलेसम्म कस्ता-कस्ता दु:ख पाएका नेपालीहरूको घाउमा मलम लगाइदिनुभएको छ ?
खासगरी काम छाडेर रक्सीको नशामा मात्रै हिँड्नेहरूलाई नेपाल पठाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने हो । यस्ता धेरै छन् जो काम गर्दैनन्, नेपाल फर्कन पनि मान्दैनन् । अर्को कगाजी प्रकिया नजानेर, नबुझेर दु:ख पाएकाहरूलाई सकेसम्म सहोयग गर्ने गरेको छु । सानोतिनो वकिल नै भएको छु । नेपाली जो कोही किन नहोस्, दु:ख पाएको छ भने उसको उद्धार हुन्छ, गर्नुपर्छ ।
पोर्चुगलमा नेपालीहरूको अवस्थाचाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ?
अब कागजी प्रकियाका लागि युरोपका अन्य देशबाट यहाँ आउनेहरू धेरै छन् । कागज बनिसकेकाहरू पोर्चुगल छाडेर जानेहरू पनि धेरै छन् । यस्तो राम्रो छ, अब अवस्था नराम्रो त कयरी भनौं र ? तर केही तत्व पोर्चुगललाई, नेपाली समुदायलाई नराम्रो देखाउन लागिपरेका छन् । खै किन उनीहरू किन यस्तो गर्छन् ?-दिलनिशानी मगर/लोकान्तरबाट
सिन्दूर हालेर भि त्र्याएकी पत्नीको बि हे गराए, दा इजोमा दिए अढाई वर्षीय छोरा !
tadalafil tablets – tadalafil cost sildenafil vs tadalafil
finasteride classification – http://finasteridepls.com/ does finasteride regrow hair
propecia coupon – what is finasteride used for propecia eye problems
what is finasteride used for – buy propecia online with prescription propecia dht blocker
buy tadalafil generic – does tadalafil lower blood pressure viagra vs tadalafil
where can i buyaresearch paper – http://boessay.com/ cheap essay writing
Yeduva – http://virviaga.com/ buy viagra maine
Fmnnkr – buy modafinil Eeawox wqrjju
Cgovge – furosemide generic Llcncl bwwxfw